Baasaboorka Soomaaliya oo aqoonsi Caalami ah ka helay Dowladda Norwey – Balcad.com Teyteyleey
Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda Soomaaliya ayaa Maanta ku dhawaaqday in Dowladda Norway ay Aqoonsatay Baasaboorka Soomaaliga gaar ahaan Baasaboorka Diblomaasiga ah ee ay qaataan Madaxda Dowladda iyo Siyaasiinta.
Arrintaan ayaa yimid kadib markii dhawaan Agaasimaha Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda Soomaaliya G/sare Maxamed Aadan Jimcaale Koofi uu safar ku tagay Dalka Norway islamarkaana uu Heshiis la soo saxiixday Dowladd Norway.
Qoraal ka soo baxay Xafiiska Hay’adda Socdaalka Norway ayaa lagu sheegay in Dowladda Norway ay Aqoonsatay Baasaboorka Diblomaasiga Soomaaliya oo ah Baasaborka ay ku Safraan Madaxda Dowladda iyo Siyaasiinta intaba.
Dhanka kale Shacabka Soomaaliyeed ayaa arrintaan u arka horumar la gaaray,maadaama Dalka Norway oo ka mida Dalalka Horay u maray ee ka tirsan Wadamada Yurub ay Aqoonsadeen Baasaboorka Soomaaliya gaar ahaan kan Diblomaasiga.
The post Baasaboorka Soomaaliya oo aqoonsi Caalami ah ka helay Dowladda Norwey appeared first on Ilwareed Online.
Ra’iisul Wasaare Xasan Kheyre oo ku booqday Isbitaal Madiino dad qaba Dhaawacyo kala duwan.+Sawiro